अमेरिकामा तातो हावाको भरिएको बेलुनमा आगो लाग्दा १६ जनाको मृत्यु
अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा तातो हावाको भरिएको बेलुनमा आगो लाग्दा १६ जनाको ज्यान गएको छ । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार दुर्घंटनामा कसैलाई जीवितनै उद्धार गर्ने सम्भावना छैन । अधिकारीहरुका अनुसार दुर्घटना स्थानीय समय अनुसार विहान ७ बजेर ४० मिनेटमा भएको थियो । दुर्घटना के कारणले भयो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन ।एयर बेलुन खेतमा झरेको थियो । […]
काठमाडौंका २९ विद्यालय बन्द हुने (सूचीसहित)
काठमाडौं, साउन १६ – सरकारले अनुमति लिएका तर निरन्तर कक्षा सञ्चालन नगरेका काठमाडौंका २९ वटा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुगमनको क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २९ वटा विद्यालयले सञ्चालनको लागि अनुमति लिएपनि निरन्तर सञ्चालन नगरेकाले बन्द गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक खगराज बरालका अनुसार ती विद्यालय बन्द गराउन […]
लागूऔषध ओसारपसारको अभियोगमा संघाई ग्रुपका अध्यक्ष पक्राउ
काठमाडौं- संघाई ग्रुपका अध्यक्ष पवन संघाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लागूऔषध बेचबिखनको अभियोगमा संघाईलाइ पक्राउ गरेको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका एसएसपी गणेश केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार आजै पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। संघाई एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका अध्यक्षसमेत हुन्। गत बुधबार संघाईको प्लाष्टिक उद्योगको गोदामबाट सयौं किलोग्राम लागुऔषध बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पर्दाथ फेला परेको […]
मकवानपुरमा दुई बस जुध्दा, ९ जनाको मृत्यु ३१ जना घाइते
हेटौँडा : काठमाडौँबाट झापाको काँकडभिट्टातर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ५०५५ नम्बरको अग्नि यातायात सेवाको बस र उदयपुरबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको ना५ख ४०६४ नंको रात्रिबस हेटौँडा–नारायणगढ सडकखण्डको रमनटारमा राति एकापसमा ठोक्किँदा नौ जना यात्रुको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ। मृतक यात्रुको अहिलेसम्म सनाखत हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वामदेव गौतमले बताए। […]
काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले जारी आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । आफूले उठाएका मागको समर्थनमा शनिबार दिउसो भएको प्रदर्शनमा डा. केसीले आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहेको स्पष्ट पारे । माइतीघरबाट सुरु भएको र्याली बानेश्वर पुगेपछि डा. केसीले संबोधन गर्दै कूशासन विरुद्धको आन्दोलनमा सबैको साथ रहने विश्वास व्यक्त गरे । […]
पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्का लागि उद्योगीसँग छलफलः उद्योगमन्त्री
काठमाडौं । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्का लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका उद्योगीसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिअन्तर्गत एकीकृत कर्मचारी सङ्घको छैठौँ केन्द्रीय अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री पाण्डेयले स्वदेशी स्रोत साधनलाई उपयोग गरी राष्ट्र निर्माणको कार्य अगााडि बढाइने बताए । मुलुकमा आर्थिक समृद्धि […]
अनलाइनबाट नक्सा दर्ता गर्नेको सङ्ख्या न्यून
काठमाडौं । नयाँ घर निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा हरेक दिन दैनिक १० देखि १५ वटासम्म नक्सा दर्ता हुने गरेकामा केही दिनदेखि अनलाइनबाटनै नक्सा पासको प्रक्रिया सुरु गरेपछि कमी आएको छ । नागरिकलाई सहज र पारदर्शी सेवा दिनका लागि विस्तार गरिएको अनलाइन सेवामा पाँच दिन बित्दा अहिलेसम्म चारवटा मात्र नक्सा दर्ता भएको सहरी विकास विभाग प्रमुख […]
गोरखा, १४ साउन – गोरखाको उहिया गाविसस्थित खोर्ला गाउँमा घरैपिच्छे बिरामी पर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । विगत दुई सातादेखि खोर्लामा फैलिएको झाडापखाला, ज्वरो तथा रुघाखोकीलगायत रोग नियन्त्रणमा नआउँदा भूकम्पपीडित स्थानीयवासी समस्यामा छन् । घरैपिच्छे बिरामी पर्नेहरु बढेपछि आफूलाई पनि रोग सर्ने डरले गाउँ छाडेको खोर्लाकी विपना गुरुङले बताए। घरमा दुई/तीन जनाको दरले मानिस बिरामी […]
भारतीय पक्षले एकतर्फी बाँध बनाएपछि दशगजामा झडप
काठमाडौं, १३ साउन — भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा बाँध बनाउन शुरु गरेपछि सप्तरीको तिलाठी गाविसमा बिहीवार तनाव बढेको छ । गत शनिवार नै भारतीय पक्षले नेपाल हुँदै बग्ने खाँडो नदी छेक्नेगरी बाँध बनाउन शुरु गरेको थियो । तर सप्तरी प्रशासनको अवरोधका कारण स्थगित काम भारतीय पक्षले बिहीवारबाट शुरु गरेलगत्तै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका हुन् । […]
काठमाडौ‌ंमा भोलि शुक्रबार सार्वजनिक विदा
काठमाडौं : रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने दिन परेकाले भोलि शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक विदा हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयले आज आज सूचना जारी गर्दै भनेको छ – यही २०७३ साल श्रावण १४ गते शुक्रवारका दिन रातो मत्स्यन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा परेकोले उक्त दिन काठमाडौं उपत्यका भित्र सार्वजनिक विदा हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो […]
अपडेट: धनकुटा बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेकाे संख्या ११ पुग्याे, ७ को सनाखत
धनकुटा– धनकुटाको सिधुवामा भएको यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेकाे संख्या ११ पुगेकाे छ। धरानस्थित वीपी काेइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि लगिएका मध्ये ४ जनालार्इ अस्पतालले मृत घाेषाणा गरेपछि मृतककाे संख्या ११ पुगेकाे हाे। यसअघि ७ जनाकाे घटना स्थलमै मृत्यु भएकाे थियाे। उपचारका लागि धरान पुर्याइएका ३३ जना मध्य ४ जनाकाे मृत्यु भएकाे हाे। अस्पतालमा […]
१३ साउन, काठमाडौं । विश्वमा आतंकवादी घटना बढ्दै गएपछि नेपालको विमानस्थलमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । दुई सातायता विमानस्थल सुरक्षामा कमान्डो तालिम गरेका प्रहरीको विशेष कार्यदल (एसटिएफ)बाट प्रहरी खटाइएको छ । सुरक्षा चुनौती मूल्यांकन गरी कार्यदलबाट ३५ जनाको प्लाटुन विमानस्थलको सुरक्षामा खटाइएको हो । विमानस्थल सुरक्षालाई बलियो बनाउन विशेष कार्यदलबाट प्लाटुन झिकाइएको विमानस्थल प्रहरी प्रमुख […]
मन्त्रालयमै चोरी, उपसचिवको टेबलबाटै हरायो ल्यापटप, आइफोनसँगै १ लाख
काठमाडौं, साउन १२ – सिंहदरबारभित्र रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा चोरी भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव चिरिञ्जिवी तिमिल्सिनाको आइफोन, ल्यापटप र एक लाख रुपैयाँ कार्यकक्षबाटै चोरी भएको हो । कार्यकक्षमा सामान राखेर शाखाको बैठकमा गएको र फर्कंदा उहाँको पैसा राखेको झोलासहित मोबाइल र ल्यापटप चोरी भएको मन्त्रालयका कर्मचारीले […]
डा. गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौता खारेजीको माग गदै निजी मेडिकल कलेजद्वारा राजधानीमा बृहत् प्रदर्शन
काठमाडौँ, १२ साउन – निजी मेडिकल कजेल सञ्चालकले डा. गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौता खारेजीको माग गदै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् । देशभरका मेडिकल कलेज सञ्चालकले सरकारले डा. केसीसँग गरिएका सम्झौताले निजी मेडिकल कलेज धरासायी हुने भन्दै खारेजीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । स्वदेशका मेडिकल कलेजमा कार्यरता कर्मचारीको रोजीरोटी नखोस्न, निर्धारित […]
पाढी पहिरोले देशभर २८ को मृत्यु, २४ बेपत्ता
काठमाडौँ, ११ साउन – गृह मन्त्रालयले केही दिनदेखि परेको अबिरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरोका कारण हालसम्म २८ जनाको मृत्यु, २४ जना बेपत्ता र १० जना घाइते भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्यूठानमा ६, गुल्मीमा पाँच, पाल्पामा चार, बाग्लुङमा चार, मकवानपुरमा तीन, रुपन्देहीमा दुई र काठमाडौँ, अर्घाखाँची, दोलखा र सर्लाहीमा एक/एक जनाको मृत्यु भएको […]
सप्तकोसीमा बाढीले खतराको विन्दु क्रस गर्दा पनि भारतले सबै ढोका खोल्न मानेन
इटहरीः निरन्तरको वर्षाले सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव निरन्तर बढिरहेको छ । पूर्वी पाहाडि जिल्लाहरुमा लगातार बर्षा नरोकिएपछि सप्तकोसीमा पानीको बहाव यो बर्षकै उच्च भएको हो । मंगलबार बिहान १० बजे सप्तकोसीमा गरिएको पानीको बहाब मापन गर्दा प्रतिसेकेण्ड २ लाख ६४ हजार ७ सय क्युसेक पुगेको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी पोषराज पोखरेलले बताए । पानीको बहाव […]
Page 998 of 1017